Esi tọgharịa Windows 10 Windows Photo viewer | Akụkọ akụrụngwa
Otu ihe na-akpasu iwe kachasị ọhụrụ nke Windows 10 ọhụrụ, gịnị kpatara ị ga-eji kwuo ya, bụ ngwa Foto, nke na-adị nwayọ nwayọ ma e jiri ya tụnyere Onye nlele foto Windows nke na-eso anyị ekerịta foto kemgbe ọtụtụ afọ. Taa, anyị na-egosi gị otu ị ga - esi jide n'aka na foto anyị niile mepere ya na Windows Photo Viewer Ma obughi na ngwa Windows 10 Photos, oburu na ichoro.
Dị ka anyị kwurula, na ndabara na Windows 10 anyị ahazilarị na ngwa ngwa Windows Photos bụ nke na-emepe foto anyị, ọ dị nwute na ọ kachasị dị ka o kwesiri ma ọ bụ na anyị ga-achọ, Ọ bụ ya mere maka ụfọdụ ihe ọ bụla n'oge gara aga ka mma, ọkachasị maka Window Photo Viewer, dị oke ọsọ ọsọ, dị mfe ma baa uru, ma ọ bụrụ na ihe arụ ọrụ, gịnị kpatara ịgbanwe ya?
Ọtụtụ oge ọ ga-adị mfe, na Windows 10 mgbe anyị mepere foto maka oge mbụ ga-ajụ anyị ihe mmemme ma ọ bụ ngwa anyị chọrọ ịmepe ụdị faịlụ ahụ. dị họrọ Windows Photo Viewer. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ihe kpatara na anyị ahọtaghị ya n'oge ahụ ma ọ bụ ugbu a anyị agbanweela uche anyị gbasara ngwa Foto, naanị anyị ga-agbaso usoro ndị a akọwapụtara na foto dị n'elu.
1 Tọgharia Windows 10 Photo Viewer
2 Ndị ọzọ na Windows 10 Photo Viewer
2.1 Igwe onyonyo
Tọgharia Windows 10 Photo Viewer
Pịa igodo Windows ma ọ bụ gaa na igbe ederede Cortana
Anyị na-ede "ndabere ngwa"
Na ngwa ndị a tụrụ aro, pịa «ntọala ngwa ngwa »
Anyị na-abanye na nhazi ahụ ma na-agagharị na mpaghara "Foto"
Anyị dochie ngwa ahụ Foto site na Windows Photo Viewer nke ga-apụta na otu ndepụta
Kedu otu ị sirila lelee ịlaghachi na onye na-ekiri ihe nkiri dị oke egwu, anyị ga-agbaso usoro ndị a ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu, egbula oge ịkpọtụrụ ya na nkwupụta ahụ. Gwa anyị, ị na-anọnyere vIhe nlele foto Windows 10 Ma ọ bụ ị na-ahọrọ Microsoft sistemụ arụmọrụ ihe nkiri?
Ndị ọzọ na Windows 10 Photo Viewer
Agbanyeghị, anyị nọ n'oge nhazi, yana etu anyị si ele foto dị na PC anyị enweghị ike ịbelata, yabụ anyị chọrọ iwetara gị ole na ole nke ndị ọzọ na Windows Photo Viewer, ka anyị nwee ike ịnwale ụzọ ndị ọzọ iji nweta ya. arụmọrụ ma na-achọpụta ụzọ anyị si ele foto anyị na Windows 10 PC, n'ezie. Ya mere, anyị na-aga ebe ahụ na obere obere ụzọ ndị ọzọ ị na-agaghị echefu.
Ihe omume mbụ a na-enye anyị ọrụ njirimara dị mfe ma na-enweghị nghọta, maka ndị na-achọghị karịa ịpị foto na ịga n'ihu adịghị njọ ma ọlị. N'ihi interface a nke minimalist, ọ na-agba ọsọ ọsọ, karịa ọtụtụ ihe nkiri Windows 10 Photo Viewer. Ọ bụ ya mere maka ndị hụrụ arụmọrụ na ịdị mfe n'anya ka ọ dị ugbu a.
Budata - Igwe onyonyo
Ngwadogwu ngwanrọ XnView maara nke ọma, nke ndị ọrụ raara onwe ha nye maka edezi foto na ọnọdụ ọkachamara. Onye nlere foto a na-enye anyị ohere idozi obere ntụpọ nkịtị na ọtụtụ foto, yabụ ọ ghọrọ n'ụzọ nchịkọta akụkọ dị mfe. N'aka nke ọzọ, ọdịdị ya dịgasị iche na ụdị onyonyo dị iche iche mekwara ka ọ bụrụ ama ama.
Budata - XnShell
Ihe yikwara ihe anyi gwara gi na mbido ImageGlass, ihe kpatara o ji abu bu oso na oso ojiji. Ojiji nke onye ọrụ ya nwere ike ịdị mfe ma ọ naghị enye ọtụtụ ozi, mana ọ nwere nhọrọ anọ dị mkpa nke onye ọrụ ọ bụla maara etu esi eji ya, na-enweghị etu ọnụ mana maka ndị niile na-ege ntị.
Budata - Irfanview
Minimalism na njirimara onye ọrụ nke ga - echetara anyị ngwa ngwa nke Mac OS X ochie ma ọ bụ Linux dị ugbu a. Ọzọkwa anyị nwere ụzọ ọzọ dị mfe, nke ga-emekwa ka anyị lelee GIF ndị na - emegharị ahụ, tinyere ihe ndị ọzọ, ya mere ejiji taa.
Budata - Nlele
You maara nke ọ bụla Ihe nlele foto Windows 10 nke ahụ na-arụ ọrụ dị ka sistemụ Microsoft gọọmentị? Gwa anyị nke ị na-eji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ihe nlele foto Windows 10
Ọ dị mma, na Windows 10 m nhọrọ "Windows Viewer Viewer" apụtaghị, naanị "Foto" pụtara (nke bụ echiche ọhụrụ jọgburu onwe ya nke Microsoft) na nhọrọ nke ụlọ ahịa ahụ.
Otu ihe ahụ na-eme m dị ka gueben, nhọrọ a apụtaghị na windo foto ngwa bụ ihe mkpofu: /
Zaghachi Jose Chacón
Na nrụnye dị ọcha nhọrọ a enweghị ike ịrụ ọrụ.
Zaghachi Abeluccio Hds
Ana m enweta nhọrọ "Windows Photo Viewer", mana ọ na-ahapụ m ka m jikọta usoro faịlụ TIF. Nke ahụ bụ na Microsoft ga-eme otu nke ya (lee mmeri 8 mmalite). Na otú ọma ndị na-ekiri Windows na-adịbu.
Ụlọ ọrụ Wallyz Prod Inc. dijo
Ihe onyonye foto Windows aputaghi m. Achọrọ m ya ebe niile. Na ihe ị kọwara maka otu esi agbanwe ngwa ndabara, Foto apụtaghị na listi nhazi ahụ
Zaghachi Wallyz Prod INC
Otu ihe ahụ na-eme m: nhọrọ Windows Photo Viewer apụtaghị. 🙁
Ọfọn, ihe na-eme m. Enwere m kọmputa na ndị ọrụ 3 na otu n'ime ha "foto" nke windo 10 apụla n'anya, yana site na ndepụta nke ngwa mmalite, kama faịlụ ndị emepere na mbụ na "foto" ejikọtara na twinui, na nke n'ezie ọ pụghị imeghe ha ma ọ bụ chọta ha. Onye ọrụ na-ekwu na ọ gbanwetụghị ihe ọ bụla, antivirus ahụghị ihe ọ bụla (kasper) na amaghị m ebe m ga-ele anya iji melite ngwa ahụ, (na ndị ọrụ ndị ọzọ na-egosi nke ọma) n'ihi nke a ka m chịrị nbudata ya site na ụlọ ahịa anaghị m achọ itinye ngwa abụọ, yabụ na ha anaghị enye nsogbu. A nwara m ịme ka m weghachi na njedebe gara aga, mana ndị ọrụ ndị ọzọ enyeghị nsogbu ọ bụla. Ya mere ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ihe ọ bụla, kelee gị n'ọdịnihu maka nkwado gị.
Zaghachi na pepemax
Ndewo, daalụ nke ukwuu, ị nyeere m aka nke ukwuu ma na-enweghị nnukwu pod
Zaghachi maria elena
Daalụ nke ukwuu. O nyeere m aka 🙂
Daalụ nke ukwuu, ị bụ mgbape
Daalụ, otu ijeri ekele.
Na Windows 10 ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ nke ọma, ọ na-ahapụ gị ka ị hụ otu foto ma ghara ikwe ka ị gaa na nke ọzọ. ịkwesịrị ịbanye ma pụọ ​​iji hụ ndị ọzọ far.
Enwere m ngwa nwere nhọrọ imeghe akwụkwọ ndị ahịa. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na Windows 7 mana mgbe ị na-agbanwe na Windows 10 ihe ị ga-eme iji soro otu ọrụ ahụ, ị ​​ga-emegharị ọbá akwụkwọ ma ọ bụ ọkacha mma na onye na-ekiri Windows 10.
Zaghachi Carlos Ramirez
Olee otú iji naghachi… ??? »» Windows foto na-ekiri »n'ihi na windo 10 dị nnọọ njọ» »
Onye na-ekiri ya apụtaghị na m ma enweghị ngwọta ọ bụla site na isoro usoro ndị a.
Achọtara m ụzọ ọzọ ma ọ bụ site na imezi ndekọ. M hapuru gi link
M na-ahapụrụ m ya, mana mgbe m mepere foto ha na-apụta nke ọma ma na-enwu gbaa, ọbara ọbara na-acha pinki pinki, ọ dị onye maara azịza ya? Daalụ
Site na atụmatụ a, Fitbit chọrọ iji weghachite ọnọdụ mbụ na ahịa n'ahịa ndị na-eyi uwe
N'anya egwuregwu bọọlụ? Nke a bụ DualShock PlayStation FC mbipụta